Thinking from History | Layma's World
Posted on June 6, 2008 by layma
Filed under: Thinking from History |	15 Comments »
Filed under: Thinking from History |	16 Comments »
Posted on August 15, 2007 by layma
ကျွန်တော့် ချစ်သူလေးက တပင်တိုင် မြနန်းက ပင်တိုင်စံ ရွှေမင်းသမီးလေးပါ….. ။ ပေါက္ကံပြည့်ရှင် ကျန်စစ်မင်း နဲ့အပယ်ရတနာတို့ ရဲ့…..ရှုမငြီးတဲ့ ချစ်သမီးလေးပါ……။ ပုဂံပြည်ရဲ့ အသည်းနှလုံး… ပုဂံပြည်ရဲ့ ပန်းနှင်းဆီကိုမှ ကျွန်တော့် နှလုံးသားက လက်ညှိုးထိုးခဲ့တာ ကျွန်တော်ကံဆိုးတာလား…..။ မင်းသမီးမို့ချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး….. ပုဂံပြည်ကို သိမ်းပိုက်ဖို့ လဲ မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူး….။ ပုဂံသားတွေ ကို အမျိုးဖျက်ဖို့ပုဂံသွေး နဲ့ကုလားသွေး သွေးရောဖို့ ဆိုတဲ့ အကြံအစည်မျိုးလဲ မထားခဲ့ရပါဘူး…..။ လောကနန္ဒာဆိပ်ကမ်းမှာ သူလေးကို စတွေ့ ကတည်းက အသဲမှာစွဲအောင် ချစ်ခဲ့ရတာပါ…..။ လုပ်ရက်လိုက်တာ အရှင်မင်းကြီးရယ်….. ကျွန်တော်တို့ချစ်ခြင်းကို “နိုင်ငံအတွက်” ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ခွဲရက်ခဲ့တယ်…..။ ကျွန်တော့် အသဲတွေ ဟက်တက်ကွဲ…. ရင်ကွဲနာကျလို့ကျွန်တော် သေပွဲဝင်ရပါပြီ……။ မသေခင် ကျွန်တော်…..ကျိန်စာတိုက်ခဲ့မယ်…..။
နောင်တချိန်မှာ ပုဂံပြည်ရဲ့ အသည်းနှလုံးဖြစ်မယ့်သူဟာ တပြည်သားနဲ့ ရပါစေ…… ပုဂံသူတွေဟာလဲ တပြည်တရွာမှာဖြစ်စေ…..ပုဂံပြည်မှာဖြစ်စေ….. တပြည်သားတွေနဲ့လက်ဆက်လို့ ….. ပုဂံသွေး ၅၀….တပြည်သွေး ၅၀….ပါဝင်တဲ့ ရင်သွေးတွေ မွေးဖွားလို့…..ကမ္ဘာမှာ “ဒါဟာ ပုဂံသားစစ်စစ်ဟေ့” လို့လက်ညှိုးထိုးပြလို့ မရအောင် ပုဂံသားတွေ ဆိတ်သုဉ်းပါစေ….. ကျွန်ုပ်ပဋ္ဋိက္ခရား၏ ကျိန်စာသည် ဤရေထု…..၊ မြေထု….၊ လေထု ….၊ တိမ်ထု များတည်ရှိနေသရွေ့တည်တံ့ပါစေသတည်း…….။ ။
မှတ်ချက် ။ ။ကြိုက်သလိုသာတွေး…. အတွေးတွေ flexible ဖြစ်အောင် တမင်ရေးထားတယ်…. လေးမကတော့ ပေးချင်တဲ့ message လေးတစ်ကြောင်းလောက် ရေးလိုက်ရရုံနဲ့စိတ်ချမ်းသာနေတယ်…။ လေးမ စိတ်ချမ်းသာတော့ ကမ္ဘာကြီးအေးချမ်းတာပေါ့….. ဘော်ဘော်တို့ လဲ စိတ်ချမ်းသာသလိုသာ တွေးသွား….။ မတွေးဘဲ ဖတ်ရုံဖတ်ပြီးတော့ ပြန်မသွားနဲ့ နော်….. ပါးပါးလေးတွေးသွား……။
Filed under: Thinking from History |	21 Comments »